Qanyare Iyo Suudi oo ku Dhawaaqay Iney Burburtay Dowladii Igad ay ku Soo Dhistay Kenya
Shir ay kula hadlayeen weriyaalka dalka ayey labadaas dagaalooge waxey ku cadeeyeen in lagu kala tegey dowladii lagu soo dhisay Kenya ayna isaga baxeen oo hadda wixii ka dambeya aysan ka mid ahayn.
Qanyare ayaa sheegay in hadda iyo wixii ka dambeeya loo noqon doono hogaamiye kooxeednimadii aysana jirin madax dowladeed. Wuxuu tilmaamay mudane Qanyare in Col. Cabdullahi Yusuf iyo isaga ay ka dhaxeyso dagaal nuucyadiisa kala duwan, sidaas daradeedna aysan jirin amar dhinaciisa uga imaan kara iyo wax tixgelina oo uu agtiisa ka leeyahay.
Sidoo kale ayuu dagaaloogaha Suudi wuxuu isna la barbar saftay Qanyare, wuxuuna sheegay in uu bilowday dagaalkii ay maaganayeen qolada Jowhar. Wuxuuna cadeeyey hubka ay heystaan iney u isticmaalayaan marba nuuca dagaalka xeeladiisu ay socoto. Wuxuu sheegay inuusan Col. Cabdullahi uusan kooxdooda ku soo rogi karin cunoqabateyn, ayna arrinkaas uga jawaabayaan gantaalo ay la beegsanayaan circa si ay kooxda jowharna u taabato cunaqabateynta ay ka soo rogayaan dhankooda.
Digniintaas culus oo ka soo yeertay hogaamiyeyaasha kooxda Muqdisho ayaa waxey cabsi weyn gelisey QM iyo deeq bixiyeyaasha caalamka. Danjire Francois Fall oo Xoghayaha guud ee Q/Midoobay uga wakiil ah Arrimaha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu deg deg warbixin arrintan uga gudbiyo, dhaqsana loo horgeeyo fadhiga soo socda ee ay yeelanayaan Golaha Ammaanka Q/Midoobay. Warbixinta wakiilka QM ayaa ah mid inta badan eedeyneysa garabka Jowhar ee Col. Cabdullahi Yusuf oo aan qaban dib u heshiisiin la taaban karo.
Warar huban ayaa sheegaya in wakiilka QM ee Soomaaliya looga yeeray New York si warbixintaas uu u soo jeediyo. Mr. Fall ayaa Warar hor u dhaca oo uu siiyey QM ay sheegayaan in warbixinta uu jeedin doono ay tahay mid laga arrinsanayo hubka ku soo qulqulaya Jowhar, isla markaana lagu muujinayo wax qabad la’aanta iyo burburka ku yimid dowladii lagu soo dhisay Kenya.
Fadhiga ay yeelanayaan Golaha Ammaanka ayaa waxaa laga yaaba iney ka soo baxdo hadalo dhiilo xambaarsan oo tilmaamaya ineysan jirin dowlad Soomaaliyeed sidaasna ay ku soo jeediyaan in QM ay qaban qaabiso shir guud oo lagu soo dhisayo dowlad Soomaaliyeed. Hadda ka hor ayaa golahaas uu soo hadal qaaday in cadaadis la saaro garabyada is haya oo laga xanibo lacagaha dibeda u taala iyo iney dibeda safar u aadaan, laakiin hadda taas meesha waa ay ka baxday kadib markii ay ku dhawaqeen kooxda Muqdisho iney burburtay dowladii dib u heshiisiinta ee lagu soo dhisay Kenya.
Warka ka soo yeeray Qanyare iyo Suudi ayaa ah mid aad u culus oo gebi ahaanba meesha ka saaray jiritaanka dowlad Soomaaliyeed. Aduunku waxey aad ula socdaan awooda iyo miisaanka culaab ahaan ay kooxda Muqdisho ku leeyihiin siyaasada Soomaalida. Waxaa xaqiiqa haddii ay ku dhawaqeen kooxdaas iney dowladii dhacday, dib u heshiisiintiina ay fashilantay iney tahay hubaal inuu burburay wixii lagu soo dhisay Kenya ama ha noqoto gole baarlamaan ama ha noqoto mid dowladeed. Waxaana suurtogal ah in sidaas ay ku raacaan QM iyo Beesha Caalamka oo hadda xaqiiqsaday in is qabsiga garabyada iska soo horjeeda uusan muuqan xal dhow oo ay gaari karaan.